Isikhephe saseHarbour Beach Haven - I-Airbnb
Isikhephe saseHarbour Beach Haven
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguGeorgia
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-27 Nov.
Ukunqumla ngokuthe ngqo ukusuka eBoat Harbour Beach entle, enombono obanzi wamanzi ukunqumla ukuya kwiTable Cape, lelona khaya limnandi. I-Boat Harbour Beach Haven isanda kuhlaziywa, inezindlu zokuhlambela zale mihla, ikhitshi lamaphupha, iibhedi ezitofotofo kunye neebhedi, ilinen esemgangathweni, i-Wi-Fi yasimahla, ii-Smart TV, i-Google Nest kunye negumbi lemidlalo elinentenetya yetafile. Ifakwe kwenye yezona ndawo zinqwenelekayo zeeholide zaseTasmania, ukwangaphakathi kohambo olulula lohambo lwemini kwiindawo ezidumileyo ezifana neStanley, iTarkine kunye neCradle Mountain. Ipaki yeSizwe yaseRocky, kunye nobuninzi bayo bokuhamba okumangalisayo, nayo isezantsi kwendlela.
I-Boat Harbour Beach Haven eyilwe ngobunono inamagumbi okulala amathathu alinganayo, inkosi eneen-suite. Amagumbi amabini amakhosikazi amabini anemibono emangalisayo yamanzi. Indawo yokuhlala ivulekile-isicwangciso kwaye iyilwe kakuhle, kunye nekhitshi le-gourmet elikhokelela kwindawo yokuphumla ebanzi. Umngangatho onesisa ujikeleze ulwandle-icala lekhaya, apho unokonwabela i-bbq phantsi kwevergola ngelixa ujonge ukutshona kwelanga phezu kweBass Strait. Ngasemva kwekhaya kukho igumbi lokulala le-3 elineebhedi ezimbini ezingatshatanga. Indawo yegaraji yayikhe yaba sisitudiyo sepilaties kwaye ngoku ingamagumbi emidlalo, enetafile yentenetya entsha kraca. Kukho amagumbi okuhlambela amabini ale mihla, aneeshawa kunye nezindlu zangasese ezisemgangathweni.
Iintsuku eziyi-7 e Boat Harbour Beach
4.81 · Izimvo eziyi-27
IBoat Harbour Beach ibizwa ngokuba lolona lwandle luphezulu lwaseOstreliya olunesanti emhlophe, amanzi anqabileyo kunye nembono emangalisayo ukunqumla kwiTable Cape kunye neRocky Cape. Ulwandle lukhuselekile kubantwana, abaya konwabela ii-rockpools zalo ezininzi, bane-surf elungileyo xa i-Easterlies ingaphakathi kwaye igadiwe ngabahlanguli ngeempelaveki ehlotyeni. I-Boat Harbour yeyona ndawo ithandwayo ngabahambi unyaka wonke, kwiiholide zaselwandle zasehlotyeni, ukubaleka kwe-Ista, umnyhadala weTulip kunye nesiseko esifanelekileyo sohambo lwemini olujikeleze uMntla Ntshona, njengokuya kwiNtaba yeCradle, eStanley naseTarkine.
Umbuki zindwendwe ngu- Georgia
Ndihlala kufutshane kwaye ndiyakuvuyela ukukunceda.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Boat Harbour Beach